R/Wasaare oo kulan hordhaca la leh Odayaasha Beelaha Hawiye.
Wararka aan ka heyleyno gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay shegayaan in Hoteel Afriik uu ka socdo kulan ay wada qaadanayaan Beelaha Hawiye iyo R/'sulwasaare Xasan Cali Qeyre.
Kalankaan ayaa sida wararka lagu helayo ku saabsan sidii loo wada shaqeynlahaa, taas oo ka dhaxeyn doonta Beelaha Hawiye iyo Dowlada Somalia, isla markaasna looga shaqeyn lahaa nabadgalyada guud ahaan Dalka iyo waliba magaalada Muqdisho.
Wararka laga Hoteel Afrik ayaa sheegay in R/Wasasare Qeyre ay kulankaan kala qeybgalayaan masuuliyiin kale oo ka tirsan Dowlada Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiro iyo xildhibano.
Waxaana ugu weyn kulnak in la taageero dowlada iyo in ay tahey muhiimada kulanka oo cidii dooneysa in dowlada laga shaqeeyo adeega Bulshada iyaduna ay diyaar u tahey in ay la shaqeyso Dhaman beelaha Soomaliyeed gaar Ahaan kuwa Beelaha Hawiye .
Dhanka kale Waxaa jiri Doona kulamo kale oo uu la qadan doono R/Wasaare Xasan Cali Qeyre Beelaha kale ee Somaliyeed Odayaashooda sidan oo kale mid la mida sida wararka ku dhow xafiiskisa ay shegayaan.
Wixii faahfaahin dheeriya dib ayaan idinkaga soo sheegi doona